Buskudka Password OFFICE
Warku casriga ah ee nidaamka ammaanka xogta iyo helitaanka password uu noqday lama huraan ah in bulshada. In kasta oo ay u baahan yihiin si ay u aamin faylasha aad, calaamadee in arrimaha amniga waa sida laba Diinaar dhinac. Ilaa hadda sida laga yaabaa in aad doonaysaan inaad xogta aad ka badan ama ka yar si qarsoodi ah oo ammaan ah ku hayn, laga yaabaa in aad illowdo furaha eraygaaga sirta ama waxa aan garanayn u bedelo. Halkan waa xalka; Password software soo kabsado Microsoft Office waxaa laga heli karaa online marka lagu daro tirada xad-dhaaf ah oo ah buskudka password maanta. Taas lidkeeda, qaar ka mid ah buskudka password ma user saaxiibtinimo ama u sugneyn ammaanka. Marka adeeganaya software arrinkaas password xafiiska, waa in aad miisaantaan u dhexeeya qiimaha iyo waxqabadka. Tilmaanta siiyo qaybtan kaa caawin doona inaad kala doorato tayada software in hubaal shidmaan aad baahida loo qabo.
Adeegyada password Office ugu files codsi Xafiiska fiican uguna kharash jaban aad u crack karin. Xitaa oo dheeraad ah si this, adeegga internetka waxay bixisaa dib u soo celinta buuxda ee ay helaan afgarasho files Office. Technology gaar ah loo isticmaalo si ay u horumariyaan software ka caawin doonaa mid soo celiyo isaga / iyada password ma ilbiriqsi gudahood. Sida muuqata, Microsoft dhisay ay kala duwan u gaar ah oo la socota kabashada password oo ka hadlaya qiimaha sare ee buskudka password ganacsi. Intaas waxaa sii dheer, oo dhan lambarka sirta ah ee kala duwan set qof iyo dhererka waxaa taageera.
Xafiiska Password Software
Erayga password Free / Excel software kabashada password Free Microsoft 9x iyo Qaybaha danbe
Password Office Recovery Lastic License Personal $59.95
Business $119.85 Microsoft 97 & versions Sare
Password Office Recovery Magic $47.99 Microsoft 2000 / XP / 2003 / Vista Or version sare ee daaqadaha
Recovery Password Vodusoft Office Single User $ 69 ama Microsoft 97/2000 / XP & version sare ee daaqadaha
Xiddig Recovery Password Phoenix Office Personal $59.95
ganacsi $119.85 Microsoft 2007 & versions sare
Password Office Recovery qalabeed $21.55 Microsoft 97/2000 / XP / 2003
Xafiiska Password Faydi $23.95 Microsoft 97-2010
Password Office Recovery Professional Basic $ 60
Ultimate $ 350 Ms Office 97 iyo versions sare
Lahjadda Recovery XAFIISKA Password Basic $ 60
Professional $ 200 Microsoft 95, 97 ama qoraalkii sare
Recovery Password Xafiiska Sare Home Edition $ 49
Professional $ 249 Dhammaan versions of Office Microsoft
1.Free Word / Excel software kabashada password
Waa software free diyaar u download online sameeyey si looga hortago software kharashka sare. Waxay ka shaqaysaa iyadoo daaqadaha 9X iyo versions PC ka dib. Helay sirta ah ee Excel / Word in Excel / Word 2003 files 97. Dildilaaca sirta hadalladaada ayaa isku dayaya ka dictionary badan oo ku saabsan files iyo isku dayo dhowr ah oo isku kulanka a. Waxaa dildilaaca sirta ah mar hesho ciyaarta.
Qalab aad u awood u qoslaan sirta / hadalka Excel. Version la mid ah oo bilaash ah software ka bixisaa isla functionalities sida software ganacsi oo waxtar leh aad.
Si ka duwan badan software free ee, waa gebi ahaanba bilaash ah oo aan shareware ama demo version ah sida No kharashka galay ee la isticmaalo ama afku.
Intaa waxaa dheer, waa xor ka furin ama spyware.
Waxay u badan tahay in ay waqti dheer qaadan maxaa yeelay waxa ay ku lug leedahay balaayiin imtixaanka ee isku password.
Waa yar wax ku ool ah, halkaas oo uu yahay furuhu adag ama mid aad u dheer.
Password Office Recovery melkesyrebakterier ka saaraysaa ama kabanayso sirta ka MS PowerPoint, MS Word, Excel MS, MS Access iyo waraaqaha MS Outlook.
Waa software password xafiiska ku ool ah oo awood u leh ka saareen badan sirta ka tiro ka mid ah files xafiiska mar. Awood daaha ka mid ah laga badiyay password VBA aad.
Taageero af-Multi waa karti leh user interface saaxiibtinimo. Kabashada Password waa wax fudud oo xataa hore users mar.
Taageerada Microsoft Office XP / 97/2000 ilaa 2007.
Waxay siisaa difaac kala duwan oo ka mid ah noocyada qoraaleed, ay diiwaan sirta ah ilaalinta, sirta ah inuu wax ka beddelo, warqadda iyo sirta buugan (Keliya Excel), Koox user (kaliya Access) iyo database.
Marka laga adayga ee sirta ah, software ka qaataa labaad dhowr crack sirta ah.
Warbixin lagu qanci karo si adag korin helitaanka aan la ogolayn.
Warqadda asalka aan modified. Barnaamijka waxaa la nuqul ka mid ah dukumeentiga ka shaqeeya oo aan badalayn nuqul ee asalka ahaa.
Software waxaa laga heli karaa kharash ah. Qiimaha gashay dhici karta in qaali ah oo xaddidan si user ah la siiyo.
Software waxaa loo isticmaalaa in lagu soo kabsado password labada ilowday ama laga badiyay. Waxaa inta badan khuseysaa soo kabsaday akhri kaliya afgarasho files. Kala duwan ee files codsiga waxaa ka mid ah; Dadka Duqeyda ah, .ppt, .xls, .mdb iyo Xafiiska 2007 qaabab file.
Interface user waxaa loogu talagalay in laga caawiyo raadinta saxda ah. Users waxay awoodi karaan inay dhigay beegyada uu si kala duwan saxda ah ee sirta ah waxay u baahan yihiin si ay u baadhaan qaab ie iyo cimri dheer password. Haddii kale, dadka isticmaala isticmaali kartaa qaamuuska kulan ku password dhakhso badan.
Si dhakhso ah kabsado password lumay ama la illoobi doonin.
Helay akhri kaliya sirta ah ee MS Excel, hadalka, PowerPoint iyo Access.
Rakibaadda waa u fududahay
Mishiinkan, user leedahay noocyo kala duwan oo doorasho uu ka soo xusho, iyadoo ay soo kabsaday password.
Waa qaali in ay helaan ama ay helaan sababtoo ah waa software ganacsi.
Waxa kaliya ee u shaqeeya Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 / Vista iyo version sare, laakiin ma ka weyn versions sida Windows 95/98.
Recovery Password 4.Vodusoft Office
Software waxaa loogu talagalay si gaar ah u soo kabashada ee illoobay / password lumiyay MS PowerPoint, Access, Outlook, Excel iyo Word. Software siinayo saddex nooc oo weerar: Dictionary Weerarkii, caayaan Force ka dhacay weerar maaskarada iyo caayaan-Force ka dhacay. Waxaa si weyn filaayo inuu ka soo kabsado password aad u adag qaab xawaare sare.
Sida muuqata, waxay taageertaa nooca document: MS Muuqaalka (* .pst), Word (* Dadka Duqeyda ah, * guraan.), Access, PowerPoint (* .ppt, * pptx.) Iyo Excel ((* .mdb, * accdb.) xlsx) * .xls, *.
Aadka filaayo in la yareeyo waqtiga loogu talagalay arrinkaas password.
Taageerada ATI (Advanced Technology interface) dardargelinta video kaararka hardware.
Interface User-saaxiibtinimo la faham looga baahan yahay ugu yaraan.
Software qabata akhri kaliya hawlgal ku qoran dukumentigan user markii kabsaday sirta ah. Tani digi khasaarada in document xafiis kasta.
Natiijada Recovery waxaa si toos ah loogu isticmaalo badbaadiyey soo socda.
Barnaamijka ayaa lagu taageerayaa function auto xiritaanka mar sirta ah waxaa soo kabsaday.
Updates waa u bilaash versions cusub sii daayay.
Version Trial of software ka taageertaa kaliya ilaa 4 qof arrinkaas password.
Recovery Password 5.Stellar Phoenix Office
Barnaamijka waxaa ku ool ah oo degdeg ah u soo kabsaday sirta qarka u saaran inuu files MS Office midkood hantida furan ama wax ka beddelo.
Waxaa la shaqeeyaa version ugu badan ee MS Office.
Its qaababka dheeraad ah awood ka mid in la qeexo kala duwan ee suuragalka ah ee dhererka sirta ah.
dildilaaca software ayaa ku password ay isku-dar ah jilayaasha ah ee dhererka siiyo hab guud xirashada baxay.
Iyadoo software qabanayo dib u soo kabashada, waxa ay muujinaysaa xaaladda nidaamka sida la filayay markii dhamaystirka iyo xawaaraha.
Ka soo kabashada -'Password Lagu Badalayo ama 'Password in la furo' for files MS Office.
U shaqeeya weerar caayaan-Force inuu ka soo kabsado sirta si sax ah.
Fududeeyaa shareeraysaa ah habka si loo yareeyo waqtiga soo kabashada
Barnaamijka waxaa filaayo in ay u ilaaliyaan dictionary in ku jira oo dhan soo kabsaday sirta firfircoon.
Qalab waxay bixisaa dadka isticmaala noocyo kala duwan oo doorashooyinka soo kabashada fudud ama jejeb oo ka mid ah sirta ah oo adag wax waqti ah gudahood.
Barnaamijku wuxuu abuuraa warbixin log off ah oo dhan hanaanka soo kabashada password in lagu kaydin karaa file ah tixraac.
Software ugu fiican ee aan laga yaabaa in dhammaan xaalado kasta oo dheer password.
6.Office qalabeed Recovery Password
Qalabka kabashada password xafiiska taageertaa MS Access, Word, Outlook, Excel, PowerPoint iyo mashaariicda VBA. Muuqaalada Its sida raadinta degdeg ah u oggolaanaysa in soo kabashada ee dhawaan la furay document Office. Isticmaalka qalab software-ka waa u fududahay ay sabab u tahay interface ka fiican loogu talagalay dadka isticmaala. Qab qabashada sir ah aad u shiidaa qaadatay dhawr ilbiriqsi. Waxaa si fiican u shaqeeyaan Xafiiska 97 / XP / 2000/2003/2007/2010.
Waxay bixisaa soo kabashada degdeg ah ama ka saarida sirta ah laga bilaabo MS PowerPoint, mashaariicda VBA, Access, Word, Outlook, Excel, sirta Koox (kaliya Access), warqadda & sirta buugan (kaliya Excel) in sirta database.
Taageerada interface multi-luuqadood oo si cajiib ah oo sahlan in ay isticmaalaan.
Si dhakhso ah ka saaraysaa dhawaan furay document Office korkiisa kor u bilowday.
Barnaamijku wuxuu helaa server u gaar ah in jebin kartaa MS Excel iyo MS Word document ilaaliyo eegin xoog dhererka ama.
Aadka ammaan u soo kabsaday macluumaad qoraalka gudahiisa.
Ma aha wax ku ool ah qaar ka mid ah qoraalkii dokumentiyada aan u ogolaan ama ka saarida soo kabashada ee qaar ka mid ah sirta ha.
7.Office Password Faydi
Software waa mid ka mid ah ugu dhaqsaha badan marka ay timaado soo kabashada password ama ka saarida. Waxaa ka saari kara ama lagu furo labada waraaqaha Excel iyo Word in ilbiriqsi. Waxaa sidoo kale khuseysaa ee farsamo caayaan-Force ama isticmaala Password ka Faydi Office si toos ah sirta ah ka saar. Software wuxuu taageeraa MS Word 97 to2010 (Duqeyda) iyo MS Excel 97 ilaa 2010 (.xls) .Waxa la socon Windows 8/7 / Vista / XP, Windows server 2008/2003/2000 x32bit ama x64bit.
Heerka soo kabashada 100% laga badiyay sirta MS Word / Excel.
Taageerada MS Word / Excel 97-2010 iyo noocyada file la xiriira sida Excel (* .xls) iyo Erayga (* Dadka Duqeyda ah).
Software ayaa si weyn filaayo in nidaamka multiprocessor u xawaare kabashada weyn.
Interface user waa ka fudud yahay kartoo u isticmaala laylis
Adeegyada online dheeraad ah waxaa la siiyaa ugu badnaan la ammaanka iyo asturnaanta damaanad qaaday.
Waxaa aan ku xaddidnayn dhererka sirta ah ama adayga by
Barnaamijka waxaa filaayo in ay taageeraan luqado kala duwan.
Version Trial of software this imtixaanka kaliya document MS Word / Excel ilaaliyaa "hantida furan", laakiin ma furi karo haddii weli la ilaaliyo.
Password Office Recovery Professional bixisaa xal sax ah barnaamijyada Microsoft Office. Recovery Password Office la shaqeeya oo dhan versions of MS Office. Waxaa si toos ah u hesha oo dhan xayiraad tafatirka iyo formatting, password ilaalinta la wadaago iyo unugyada qufulan.
Helay sirta ku dhowaad dhakhso loo eegin dhererka ama adayga.
Waxay bixisaa taageero afaf badan iyo soo kaban karto, characters Cyrillic, Latin iyo hieroglyphics.
Aadka awood u mideeyo laba nooc oo ah weerar (caayaan Search, raadinta Smart oo dictionary ku salaysan) ama iyaga codsanaya mid mid.
Woks ayaa software dhakhso u sirta xafiiska daciif ah.
Waxaa uu dhowr files isku mar la hormariyo xawaaraha kabashada password.
Aadka kartoo shaqeynta la habka mudnaanta barnaamijka iyo doorasho bixinta macluumaadka sirta ah.
Password la soo kabsaday karaa oo kaliya button click ah sababta oo ah interface fudud.
The feature Auto Save waa mid aad u sahlan tahay dadka isticmaala.
Taageero Professional iyo update lacag la'aan ah ilaa 12 bilood.
Version Trial of software ah ma bixiso oo dhan functionalities ah.
9.Accent XAFIISKA Password bogsadaan.
Software software-ka laga heli karaa dhowr ah oo kala duwan .Waxa taageeraa oo dhan qaabab file ahbaa Xafiiska Open ama MS Office laga bilaabo sanad kasta.
U shaqeeya daaqadaha 7/8 iyo qoraalkii hore.
Barnaamijku waxa uu ka shaqeeyaa majorly saddex siyaabood; dictionary, caayaan-force ama maaskaro weeraro.
Software ayaa si toos ah kabanayso sirta ah la shaqeynta dheeraad ah oo xuduudaheedu user-qeexay ama sanyihiin.
Xeerarka hidde- lagu dari karaa si qaamuuska ay ka mid shaqeynta af Dhaqale.
Taageerada Ms Office 2000 ilaa 2013 iyo OpenOffice 1-4
NVIDIA iyo AMD kaararka graphic awood in ay baadhaan 40 jeer ka dhakhsi.
Xawaare hufan ee dhammaan Processor Intel iyo AMD.
Barnaamijku wuxuu bixiyaan waxqabadka ugu wanaagsan qaraabo in ay qiimaha.
DAMMAANAD-QAADKA 'helaan kama dambaysta ah iyo decryption ee Word & Excel 97/2000 files.
Waxay leedahay technology GPU dheeraad ah in uu awoodo inuu soo kabsaday ugu adkaa encryptions password
Versions Trial muujiyaan oo kaliya laba calaamadood hore ee sirta ah, ma badbaadiyo xaaladda kabashada file soconna wakhti ka sii dheer.
Recovery Password 10.Advanced Office
Recovery Password Office Advanced badalay, kabanayso oo ka saaraysaa sirta ka ilaaliyo waraaqaha MS Office dhow goobtii. Waxa ay taageertaa oo dhan versions of xafiiska Microsoft. Software sidani oo waraaqaha ee Hangul Office iyo qaabab Document Open. Waxaa intaas dheer in kuwaas, waxaa soo kabanayo Access, Excel, Outlook, Project, PowerPoint, Visio, Money, Daabacaadda, Word iyo sirta OneNote. Waxaa xawilaadda farsamada daaqadda in lagu furo mashruuc kasta oo VBA ilaaliyo iyo dib MS ku jira Explorer internet.
Waxa ay taageertaa waraaqaha Hangul Office
Software ayaa isla soo kabanayo sirta ah ee wax soo saarka badan.
Unlock waraaqaha sirta hore u soo kabsaday isla.
Waxaa baadhayaa oo dhan tricks yaqaan iyo Combuutarada qoyska Xafiiska kabashada degdeg ah.
Awoodaha xawaaraha hardware dheeraad ah hoos u password muddo soo kabashada ay qodob ka mid ah 50.
Software ayaa si weyn filaayo in la code heerka hoose si ay u kordhiyaan wax-qabadka.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay inay isticmaalaan wakhtiga processor si fiican.
Iyadoo u kaca ee versions cusub sida Xafiiska MS 2013, uu ka soo kabsaday ammaanka Adag noqon xanuujin gaabis ah iyo hawlqabad la'aan xitaa gargaarka jawi GPU la dedejiyey.
VBA Password kabashada DSHISKA
Tool Recovery Password
Excel Tool VBA Recovery Password http://www.excel-tool.com $29.95 Microsoft Excel 97/2000 / XP / 2003/2007 ama wax ka sareeya.
Master VBA Recovery Password http://www.rixler.com Personal $29.95
Bussines $59.85 MS Word, Excel MS, MS Muuqaalka 97/2000 / XP / 2003/2007/2010, MSPowerPoint 2007/2010.
VBA Password http://lastbit.com/register.asp $ 39 Microsoft Office 97 2007
Advanced VBA Recovery Password http://www.openwall.com/cgi/redirect.cgi?elcomsoft-vba $ 79
Professional $ 199 Microsoft Office 97 2007
Dib u celi VBA Password http://store.esellerate.net/s.aspx?s=STR2648995036 $29.00 Xafiiska Microsoft 2007-2013
1.Excel Tool VBA Recovery Password
Codsiga software waxaa loogu talagalay inuu ka soo kabsado mashaariic vba ilaaliyo fayl la kordhin sida (.xls, .xlam). Waxaa soo kabanayo illoobay labada badiyay password. Codsiga taageertaa soo kabashada ee sirta ah oo dhererkeedu yahay ama codsiyada complexity.VBA waxaa taageera la soo kabashada dheeraad ah MS Excel 97 2010 qaabab file sirta ah. Its design iyo codsiga si fudud u soo kaban karto, ama mashaariicda furan VBA la ilaaliyo sirta ah.
shuruudaha Software: Ms Excel 97 / XP / 2000 ilaa 2007 ama wax ka sareeya.
Version hadda: 10.6.1
Waa lagu dabaqi karo oo dhan dhererka password oo adag.
Isticmaal khayraadka computer si fiican.
Lagu dabaqi karo ugu versions Microsoft Excel
Software waxaa laga heli karaa sida freeware ah.
User interface Easy la badhamada shaqeynta dheeraad ah.
Software Waa wax fudud in ay helaan iyo qaybiyo.
Waa xad gaabis ah marka kabsaday sirta adag ama dheer.
Waxaa keliya oo la adeegsan karo in dhowr qaabab file MS Excel.
Master 2.VBA Recovery Password
VBA Master Recovery Password software dhabta kabashada ee password dokumentiga Microsoft Office. Waxa ay taageertaa MS Excel, Word, PowerPoint iyo Outlook. Software soo bandhigayaa sirta ah shaashadda isla markiiba waxaa dildilaac u. Waxaa si toos ah u baadhaa dokumentiga la ilaaliyo gudahood files Office wuxuuna abuuraa sirta ah goobtii.
Waxaa dildilaaca VBA mashaariic sirta ah in Outlook, PowerPoint, Excel iyo waraaqaha Word goobtii.
Barnaamijka oo dhan qoraalkii ugu waaweyn ee qalabka Microsoft Office sida waraaqaha Outlook, PowerPoint, Excel iyo Word (97/2000 / XP / 2003/2007/2010 versions).
Function auto-raadinta ayaa isticmaala saamaxaaya in ay helaan dhammaan mashaariicda VBA iyo waraaqaha Microsoft Office la sirta ah iyo kabanayso sirta ah ay.
Waxay bixiyaan 100% lagu kalsoonaan karo soo kabashada password ama ka saarida mashaariicda VBA.
Password ayaa soo celiyay waxaa soo guuriyeen in sabuurad ee aragtidaada.
Waxaa loo qorsheeyay in la soo celiyo sirta lumay loogu VBA dadaal ugu yar.
Xaqiiqdii waa ammaan.
Software ayaa si buuxda ma taageeri Microsoft Office 2013 versions.
VBA software Password kabanayso xogta si aad u yara yar oo ugu dambaysa. Waxaa soo kaban karto, password mashruuca VBA in modules kala duwan (documents Excel iyo Word, Access, database). Intaa waxaa dheer, waxa ay taageertaa universal VBA kabashada password lagu dabaqi karo dhammaan codsiyada VBA.
VBA la shaqeeyaa laba matoorada kabashada asaasiga ah; marka hore waxaa loogu talagalay files MS Access, Excel iyo Word. Waxa ay taageertaa Access XP / 2003 oo dhan versions of Excel.
Habka labaad u shaqeeya farsamo universal soo kabashada oo sahlaysa in soo kabashada ee modules VBA in codsi kasta. Weerar caayaan-force waxaa loo isticmaalaa inuu ka soo kabsado sirta ah ee Xafiiska 2000 documents / XP.
Version dhabta ah ee VBA qalab kabashada awood u soo kabatay dhammaan sirta ah ee waraaqaha Xafiiska midig ka Ms Office 97.
Haddii arrinkaas uu qaato waqti, jid kale u raaci karto resetting sirta ah in mid ka mid ah oo loo yaqaan.
Waxay bixisaa dagdag ah si ay mashruuca password-ilaaliyo VBA helaan.
Software wuxuu bixiyaa hab kabashada dheeraad ah universal oo awood u kabashada mashruuca VBA in codsi kasta
Waxaa mararka qaarkood waxay qaadataa waqti dheer inay ka soo kabsadaan sirta ah mid aad u adag ama ka badan.
Dib u celi VBA Password waa utility software ah ee arrinkaas afgarasho module-mashruuc VBA in waraaqaha Microsoft Office (Word, Excel, Project iyo Power Point) a. Waxaa si weyn loo codsatay in waraaqaha Office iyo codsiyada kale ee isticmaala macros VBA. Barnaamijku wuxuu ka dhigaa xafiiska deegaan wanaagsan by automating xafiiska task.All sharci ah ugu versions of Ms Office ka 97, XP, 2003 ilaa 2007 waxaa taageeraya.
Waxa ay taageertaa qoraalkii ugu dambeeyey ee Ms Office (2007 ilaa 2013) iyo dhammaan qoraalkii sharciga ah ee 97, 2000, XP iyo 2003.
Software uu ka soo kabsanayo nooc kasta oo ah sirta ah (passwords multi-luqadood waxaa ka mid ahaa).
Barnaamijku waxa uu line amarka taageerada socda codsiga in hab Dufcaddii.
Waxaa ka saaraysaa password si ammaan ah iyada oo aan waxyeelo ay ku files shakhsi ama dokumentiyo iyo hayaan automatic.
Waxa aanu taageeraan Ms Access iyo Muuqaalka qaabab file
5.Advanced VBA Recovery Password
Software waxaa laga heli karaa sida software shelf ganacsi-off ah ay ElcomSoft. Dildilaaca barnaamijka ayaa laga badiyay ama illoobay sirta ah ee Visual Basic u Codsiyada (VBA) ee edit ama aragtida hab. Software wuxuu taageeraa waraaqaha Ms Outlook, Access, Word, Project, Excel, PowerPoint iyo Visio. Waxay leedahay awoodaha dheeraadka ah ee furo ilaaliyo Excel dar-tago. Nasiib wanaag; waxa ay la shaqeysaa codsiyada kale VBA karti sida WordPerfect Office, Corel iyo AutoCAD. Dhammaan versions of Ms Office (97 ilaa 2007) waxaa taageera-midkood daaqadda ama si toos ah.
Go'aana ka dhan afgarasho files VBA si fiican.
Waxa ay taageertaa hawlaha dheeraadka ah ee furo Excel dar-tago.
Software uu ka soo kabsanayo sirta VBA dheeraad ah oo isla.
Waxaa soo kabanayo password u VBA il code
The software Recovery Password VBA taageertaa qoraalkii ugu badan ee Microsoft Office qaabab file document.
Software ma qummaati uma shaqeeyo version danbeeyay ee Microsoft Office (Xafiiska Ms 2013).
Waxa uu noqdo mid aad gaabis ah marka dhererka sirta ah waa ka sii dheer ama in ka badan oo adag.
Sidee si ay u cusboonaysiiyaan Hard Disk Drive (HDD) qaybta xun
Sida loo xaliyo dhibka Operating System lagama helin
> Resource > Utility > Xafiiska Crackers Password in crack Excel / Word / PPT Password